Ọtụtụ n'ime ndị Huawei mobile ngwaọrụ-agba ọsọ na Android n'elu ikpo okwu na fọrọ nke nta niile anyị-ama na a ala ndabere ọrụ bụ ihe na Android adịghị enye ma. Ugbu a, otu anaghị eche ọtụtụ ihe banyere nke a ma ọ bụrụ na gị, dị ka a ọtụtụ ndị ọzọ, dị nnọọ na nso nso kpebiri ka ịgbanwee site na Android ngwaọrụ mkpanaaka na iOS ngwaọrụ. Ugbu a, m tech savvy m na-onwe m emelitere mgbe niile banyere ndị ọhụrụ na teknụzụ. M na-echeta oge mbụ m onwe ya kwa kpebiri ịgbanwe ekwentị m. M nwere ihe ochie Android na ngwaọrụ na nọ na-enweta nnọọ ngwa ngwa maka ụdị arọ ojiji m nwere. Ma, m chere nke ịzụ a ọhụrụ ekwentị, nke ahụ bụ a ọhụrụ ulo oru iOS ngwaọrụ site Apple. Ugbu a, a ịbụ mbụ m ahụmahụ, na-agbanwe na-iOS si Android, o siiri m. Ihe m na-agbalị mgbe ahụ bụ ike a ndabere maka m ochie Android ekwentị n'iji Android ekwentị njikwa-akpọ ngwá ọrụ 'HiSuite', nke na-nyere site Huawei. Ọ na-arụ ọrụ kwa, mara mma nke ukwuu ka ọ bụla ọzọ free ndabere ngwá ọrụ; ọ mere ndabere m niile kọntaktsị, kalinda, ozi, media faịlụ na ndị ọzọ na ozi na kọmputa m. Ma, mgbe ahụ m na aghaghị m na data site na kọmputa ka ọhụrụ m iPhone. Usoro a nyeere ma ka hapụrụ ụlọ maka mma dị ka e nwere ka a mmaji nke data furu efu na usoro na m ga-họọrọ ezerewo ma Ewoo.
Mgbe ahụ na nso nso, otu enyi m kwa kpebiri iji kwalite ochie ya Android ekwentị ka ọhụrụ iPhone na nke ahụ bụ mgbe m n'ezie malitere anya n'ihi na mfe na maa irè karị ụzọ nke na-ebufe data n'etiti abụọ ndị a nyiwe na ngwaọrụ. Le, dị ka m ugbu a nwere ike ji nganga na-ekwu na m n'ezie na ọ bụ ihe ịga nke ọma na-achọta kasị mma ngwá ọrụ si n'ebe, MobileTrans si Wondershare. Ọ na-eme ihe na ndị na free ndabere ngwaọrụ ga bụghị mgbe aka na. Ọ bụghị nanị na nkwado ndabere na mpaghara weghachite gị ochie Android ngwaọrụ, ma ike nyefee ọ bụla data, M pụtara dum data na-agụnye kọntaktị, ozi ederede, oku na ndekọ, photos, music, video na ngwa n'etiti iPhones, gam akporo ngwaọrụ, WinPhone na Nokia Symbian igwe - niile mere n'ime nanị otu-pịa!
Ebe a bụ njikọ ibudata ma wụnye a magburu onwe ngwá ọrụ:
Ugbu a, ka anyị na-aghọta ụzọ ndabere na weghachite Huawei ngwaọrụ MobileTrans Nanị, na-agba Mobiletrans, mgbe ahụ, jikọọ ekwentị gị na kọmputa na ị ga-ahụ n'okpuru interface:
• ndabere faịlụ site na Huawei ekwentị na kọmputa - Pịa na "ndabere ekwentị gị" bọtịnụ na homepage, nke ga-ewe gị nkwado ndabere na mpaghara mode dị ka n'okpuru. A ga-enwe a ndepụta nke ọdịnaya na i nwere ike ndabere si Huawei ekwentị na kọmputa, nanị akara bụla ị chọrọ ma pịa "Malite oyiri".
• Iweghachi faịlụ site na kọmputa na-Huawei ekwentị - Gaa homepage, pịa na "Weghachi si Backups". Ugbu a, ị nwere iji họrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ Ọkpụkpọ si dobe ala ndepụta na mgbe ahụ ị na-eru weghachi mode dị ka n'okpuru. A ga-enwe a ndepụta nke ọdịnaya na ị nwere ike ịhọrọ weghachi na ekwentị gị, nanị akara bụla ị chọrọ ma pịa "Malite oyiri".
NDỤMỌDỤ: MobileTrans ike ọ bụghị naanị ike na-eweghachiri backups, kamakwa nwere ike iweghachi backups kere site ọzọ software, dị ka iTunes na blackberry Desktọpụ Suite.
Ugbu a, ka anyị na-amụta, otú nyefee faịlụ n'etiti Huawei na ndị ọzọ na ekwentị. Nke mbụ niile, jikọọ ekwentị abụọ gị na kọmputa, ma họrọ 'ekwentị na ekwentị transfer' mode nke ga-abụ na homepage, mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ window gosiri dị ka n'okpuru. Ekwentị mkpanaaka na a ga-egosipụta na ebe nke 'Isi Iyi' na 'Destination', data ga nyefee si 'Isi Iyi' iji 'Destination'. Nke a bụ oké egwu ya biko hụ na ekwentị mkpanaaka na-egosipụta n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụrụ na ị na-ahụ na nke igwe na-na-ezighị ezi ebe, nanị pịa 'tụgharịa' button-agbazi ha. Ugbu a, ị nwere ike họrọ ihe niile na ị chọrọ nyefee na pịa 'Malite oyiri' na-amalite nyefe.
NDỤMỌDỤ: MobileTrans bụ dakọtara na ngwaọrụ dị iche iche OS dị ka Apple iOS, Android, WinPhone, Nokia Symbian na ya mere nwere ike ga-eji na ndị a na ngwaọrụ dị ka mma.
> Resource> iOS> otú nyefee data si Huawei ka iOS ngwaọrụ